Umthetho Wezabasebenzi - Labour Law
AMALUNGELO AKHO NJENGOMSEBENZI,ZIVIKELE!
Inhloso yale ncwajana ukuphendula imibuzo esihlangana nayo nsuku zonke emayelana namalungelo abasebenzi endaweni yomsebenzi nokunikeza amacebo awusizo futhi asemthethweni uma umsebenzi ezithola exoshwa emsebenzini.
Ngaze ngajabula! Ngithole umsebenzi!
Uma uqashwa, isinyathelo sokuqala ngokuvamile ukusayina isivumelwano somsebenzi. Unelungelo lokuthola imigomo nemibandela oqashwe ngaphansi kwayo ibhalwe phansi. Kungenzeka futhi uthole okubhaliwe okusho indlela umqashi alindele ukuthi uziphathe ngayo endaweni yomsebenzi, okuzothi uma kutholakala ukuthi awenzi ngaleyo ndlela, umqashi akuvezele izindlela ongajeziswa ngazo uma kungatholakala ukuthi uyaqhubeka nokungaziphathi kahle emsebenzini. Umsebenzi unesibopho sokuziphatha kahle emsebenzini futhi athembeke.
Umqashi nay ekufanele athembeke futhi asebenzisane kahle nomqashwa / nomsebenzi wakhe.
Umqashi kumele ngaso sonke isikhathi aqinisekise ukuthi umsebenzi wakhe uphephile futhi kumele amunike namathuluzi okusebenza adingekayo ukuze umsebenzi akwazi ukwenza umsebenzi wakhe, konke lokhu kumele akwenze mahhala umqashi.
Kumele nginikeze isaziso esingakanani ngaphambi kokuba ngiqale emsebenzini wami omusha?
Uma ususebenze isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezingu-6 kumele unikeze isaziso seviki elilodwa (1 week).
Uma ususebenze isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezingu-6 kodwa ngaphansi kwezinyanga ezingu-12, kumele unikeze isaziso samaviki amabili (2 weeks).
Uma ususebenze isikhathi esingaphezu konyaka owodwa kumele unikeze isaziso samasonto amane (4 weeks).
Uma isivumelwano (contract) sakho sisho okuthile okuhlukile, isibonelo: ukuthi kumele unikeze isaziso senyanga, lelo lungiselelo liyosebenza uma nje umqashi nomsebenzi beboshwe yinkathi efanayo yaleso saziso.
Ngabe wena ungumsebenzi na?
Umthetho ovikela abasebenzi wakhelwa ukuvikela abasebenzi kuphela, osonkontileka abazimele ababaliwe kukokhu kuvikeleka. Usonkontileka ozimele ngumuntu owenza umsebenzi ngaphansi komunye umuntu kepha inzuzo ayenza lapho kuba ngeyakhe. Usonkontileka ozimele akaqashiwe esikhungweni noma enkampanini ethize ngakho-ke uyazilawula yena. Uma, ngokwesibonelo, ubiza uplamba ukuba azokulungisela ipayipi eliphukile, wenza umsebenzi ngokwakhe, akayena umsebenzi oqashiwe, uyazisebenza yena.
Abasebenzi basemakhishini (domestic workers) nabasebenza engadini ababambe amatoho bangabasebenzi abaqashiwe futhi bangena ngaphansi kwesigaba sokuvikelwa ngumthetho wabasebenzi. Uma kuza kulolu hlobo lomsebenzi, kuneziqondiso ezikhethekile ezikhishelwe lo mkhakha, ezitholakala kwi-website yoMnyango Wezabasebenzi.
Ngabe abasebenzi abanqunyelwe isikhathi esithile bangabasebenzi?
Umsebenzi onqunyelwe isikhathi esithile emsebenzini (fixed-term worker) ngumuntu oqashelwe isikhathi esibekiwe noma oqashelwe ukwenza umsebenzi othile, okuthi uma kuphela leso sikhathi noma lowo msebenzi, isivumelwano sakhe somsebenzi kube sesifike ekugcineni. Akujwayelekile ukuqashwa njengomsebenzi wesikhathi esinqunyiwe esingaphezu kwezinyanga ezintathu. Uma kwenzeka, uthathwa njengomsebenzi oqashwe ngokuphelele. Leli lungiselelo lisebenza kubasebenzi abahola ngaphezu kwesilinganiso esithile seholo esinqunywa nguNgqongqoshe Wezabasebenzi. Ngo-2016 isilinganiso esasibekiwe sasingu-R205 000 ngonyaka. Kukhona okunye okumbalwa okuhlukile ummeli wakho angase akwazi ukukuchazela khona.
Kuthiwani ngama-labour broker?
Uma uqashwe ngumxhumanisi wekilayenti nabasebenzi (labour broker) noma abophiko lwamatoho (temporary employment service), ikilayenti lingakusebenzisa isikhathi esiyizinyanga ezintathu kuphela. Uma usebenzela ikilayenti isikhathi esingaphezu kwalesi, uzothathwa njengomsebenzi oqashiwe walelo kilayenti. Uma kukhona ukwephulwa kwanoma yimaphi amalungelo akho, ungase uthwese icala i-labour broker kanye/noma ikilayenti.
I-labour broker kumele ibe ngebhalise noMnyango Wezabasebenzi.
Uma i-labour broker ixosha umsebenzi ukuze nje igweme uMthetho, kuzobe kungafanelekile ukwenza kanjalo.
Sizani! Ngicabanga ukuthi ngisebenza ngokweqile
Imibandela Eyisisekelo Yomthetho 75 Wabasebenzi ka-1997 (BCEA) ibeka izimfuneko nemibandela eyisisekelo ngabasebenzi. Uma isivumelwano sakho somsebenzi (contract) sinemibandela eminingana ekuvunayo yokusebenza kune-BCEA, kuyosebenza sona isivumelwano somsebenzi; kepha uma kuyi-BCEA ekuvuna kakhulu, lapho-ke kuyosebenza yona i-BCEA.
Ithini i-BCEA ngokuthatha ikhefu emsebenzini?
Wonke umuntu uvumelekile ukuthatha izinsuku ezingu-15 zekhefu emsebenzini ngonyaka. Izinsuku zakho zekhefu aziveli nje zinqwabelane, ngakho uma ungazithathi izinsuku zakho zekhefu onyakeni, unezinyanga eziyisithupha onikezwa zona ukuba usebenzise izinsuku zakho ngaphambi kokuba uphucwe lezo zinsuku.
Uma usebenza izinsuku ezinhlanu ngesonto, uvumelekile ukuthola izinsuku ezingu-30 zekhefu uma ugula esikhathini esiyiminyaka emithathu.
AMALUNGELO AKHO NJENGOMSEBENZI, ZIVIKELE! LOKHO OKUFANELE UKWAZI
Uvumelekile ukuthola izinyanga ezine zekhefu uma ungumuntu wesimame uyobeletha, lelo khefu alikhokhelwa. Ngale sikhathi ungakhokhelwa umqashi wakho, ungacela ukukhokhelwa eSikhwameni Somshwalense Wabangasebenzi.
Uvumelekile ukuthola ikhefu uma udinga ukunakekela umndeni wakho odinga usizo, ikhefu lakho lingaba yizinsuku ezintathu ngonyaka, isibonelo, uma kukhona odlulile emhlabeni emndenini wakho nalapho ingane yakho igula. Konke lokhu sekuhlangene uthola izinsuku ezintathu, awutholi izinsuku ezintathu ngesenzakalo ngasinye.
Ithini i-BCEA ngamahora omsebenzi?
Umsebenzi angasebenza amahora angu-54 ngesonto kuphela. Uma umsebenzi esebenza izinsuku ezinhlanu noma ngaphansi ngesonto, akufanele asebenze amahora angaphezu kwayisishiyagalolunye ngosuku. Uma umsebenzi esebenza izinsuku eziyisithupha noma ngaphezulu ngesonto, akufanele asebenze amahora angaphezu kwayisishiyagalombili ngosuku.
Ukusebenza isikhathi eseqile (overtime) kumele kwenzeke uma umqashi nomsebenzi bevumelana, umqashi kumele akhokhele umsebenzi imali ephindaphindwe kanye nohhafu weholo ajwayele ukumholela lona. Umqashi angenza lokhu noma anike umsebenzi isikhathi sokuyophumula ekhaya. Uma umsebenzi ngokuvamile engasebenzi ngeSonto noma ngeholidi bese bevumelana nomqashi wakhe ukuthi uzosebenza kulezi zinsuku, kumele umsebenzi akhokhelwe iholo eliphindwe kabili noma athole ithuba lokuyophumula ekhaya.
Izihlinzeko eziphathelene namahora omsebenzi azisebenzi kubasebenzi abahola imali engaphezu kwaleyo ebekwe kuNgqongqoshe Wezabasebenzi ebeseyishiwo ngenhla, kodwa ezingase zishintshiwe njalo ngezikhathi ezithile.
Umqashi angase axoshe umsebenzi uma enesizathu esizwakalayo FUTHI elandela inqubo efanele. Kunezizathu ezintathu kuphela umsebenzi angaxoshelwa zona –
izizathu ezingokwenqubo yokusebenza (operational reasons); noma
ukwehluleka ukusebenza (incapacity).
Ukwehluleka ukusebenza kungase kubhekiselwe ekuguleni, ukulimala noma izinga eliphansi kakhulu lomsebenzi (poor work performance). Izizathu ezingokwenqubo yokusebenza nazo zibhekiselwe ekutheni kudilizwe abasebenzi (retrenchment) noma ukubaphungula (redundancy).
Umqashi kumele enze ngokuvumelana nomthetho nenqubo yakhe yokuqondiswa kwezigwegwe. Uma ingekho inqubo enjalo endaweni yomsebenzi, inqubo ebekwe nguMthetho 66 Wokusebenzelana Nabasebenzi ka-1995 (LRA) izosebenza. I-LRA iveza ukuthi kukhona inqubo ekhethekile kakhulu umqashi okumele ayilandele uma efuna ukuxosha umsebenzi nganganoma yisiphi sezizathu ezintathu ezishiwo ngenhla. Ngisho noma kungaba umqashi unesizathu esizwakalayo kodwa ahluleke ukulandela inqubo evezwe yi-LRA, lokho kuxoshwa kuyoba okungafanelekile.
Kuyini ukuziphatha ngendlela engafanelekile?
Umsebenzi angase axoshwe uma ephula umthetho ofanele, kepha loyo msebenzi kumele kube ubewazi lowo mthetho, noma bekufanelekile ukuba uyawazi, noma lowo mthetho uke wasetshenziswa, futhi ubusetshenziswa ngokungashintshi khona endaweni yokusebenza.
Umqashi kumele abe esemisa ikomidi lokuqondiswa kwezigwegwe lapho umqashwa ezonikezwa khona isixwayiso esanele ukuze akwazi ukuzilungiselela ngaphambi kokuba ame phambi kwaleli komidi. Umsebenzi kumele anikwe ithuba lokubeka udaba lwakhe emkhandlwini wokuqondiswa kwezigwegwe futhi avunyelwe ukubiza ofakazi abangase bahlatshwe ngemibuzo. Umsebenzi akanalo ilungelo elizenzekalelayo lokuletha ummeli ukuba azomumela ecaleni, kodwa angase asebenzise ummeleli wenyonyana yabasebenzi noma umsebenzi akanye naye.
Ngisho noma umsebenzi etholakala enecala, ukuxoshwa njengesijeziso akufanelekile ngaso sonke isikhathi. Umqashi kumele acabangele isimo somsebenzi ngaphambi kokuba kwenziwe isinqumo sokuxosha umsebenzi.
Kuthiwani ngokuxoshwa ngenxa yokwehluleka ukwenza umsebenzi Kanye nokuxoshwa ngezizathu ezingokwenqubo yokusebenza (‘ukudiliza / ukuphungula’)?
Uma umqashi efuna ukwenza ngendlela elungile, kumele alandele inqubo ebanzi yokuthintana nomsebenzi/ummeleli womsebenzi lapho lonke ulwazi luhlolwa khona futhi umsebenzi enikezwa ithuba lokuza nezinye izindlela, athole nezizathu kumqashi ngezinqumo ezenziwe.
Indlela ebekwe yi-LRA izothatha isikhathi ukwenza ngokuvumelana nezinqubo ezibekwe yi-LRA, lokhu kuyothatha okungaphezulu komhlangano owodwa.
Ummeli wakho uzokwazi ukukunikeza ulwazi olwengeziwe ngale nqubo.
Kuthiwani ngokulimala usemsebenzini?
Uma umuntu elimale esemsebenzini angacela isinxephezelo kuKhomishina Wezinxephezelo (Compensation Commissioner). Umqashi wakho kumele akusize ngamaphepha afanele ukuze ukwazi ukufaka isicelo sokunxeshezelwa.
Uma ufuna ukufaka isicelo sesinxephezelo ngoba ulimalile usemsebenzini kumele ukhumbule lokhu okulandelayo:
Bika ukulimala kumuntu okuphethe noma kumqashi wakho ngokushesha; umqashi kumele abikele uKhomishina Wezinxephezelo bese ethumela amafomu afanele.
Kumele uthole ifomu i-C.CI.2 kumqashi wakho ulihambise kudokotela wakho ukuze aligcwalise. Uma udokotela eseligcwalisile, kumele ulibuyisele kumqashi wakho.
Umqashi kumele athumele leli fomu kuKhomishina Wezinxephezelo bese wena kumele umazise umqashi wakho ukuthi kwenzakalani. Kumele umqashi wakho abe nazo izindlela zokukuthola, isibonelo, inamba yocingo ukuze noma yiziphi izimali ezamukelwa ngumqashi kuKhomishina Wezinxephezelo akwazi ukuzithumela kuwena.
Uma umqashi engazange awathumele amafomu noma izimali ezifakelwe isicelo zithatha isikhathi eside, kumele uthintane nesikhungo sabasebenzi esiseduze ukubike lokho.
Ngabe nginalo ilungelo lokuthola izimali ezikhokhelwa abangasebenzi?
Uma uye waxoshwa (akukhathali ukuthi sithini isizathu sokuxoshwa) ungasifaka isicelo semali eSikhwameni Somshwalense Wabangasebenzi (Unemployment Insurance Fund). Umqashi wakho kumele akusize ngamafomu afanelekile ukuze ukwazi ukuthintana noMnyango Wezabasebenzi.
Uma unomuzwa wokuthi uye waxoshwa kungafanele, kufanele ufake isicelo kwi-CCMA kungakadluli izinsuku ezingu-30 zokuxoshwa kwakho. I-CCMA izobe isikunikeza usuku lwe Con-arb. Ngalolu suku iKhomishane izozama ukuhlanganisa lolu daba bese ibona ukuthi abathintekayo bangaluxazulula yini. Uma kungalungi, izoqhubeka nesimangalo (okuzoba njengecala lasenkantolo).
Ukumelwa ngummeli akuvamile ukuvumeleka e-CCMA kepha omele inyonyana yabasebenzi noma umsebenzi okanye nawe angakumela.
Inombolo ye-call centre ye-CCMA ithi: 0861 16 16 16
Amafomu okuqhubeka nenqubo atholakala kwi-website ye-CCMA ethi www.ccma.org.za.
Ungavakashela futhi i-website yoMnyango Wezabasebenzi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe nanganoma yiziphi izindaba ezixoxwe kule ncwajana www.labour.gov.za .